MAALINTA CAASHUURAA MUSLIMIINTA SUNNO IYO SHIICABA MIDBA SI KU AH – Sumcadda Islaamka
Maanta oo kale oo ah tirsiga sanadka hijriga bisha muxaram tobankeeda waa maalin u calaamadsan oo soo jiidata inta badan dadka islaamka u nisbo sheegta nooc ay yihiinba.
Tusaale ahaan madaahibta suniga iyo shiicada oo ah kuwa ugu tunka weyn mad-habadaha u nisbo sheegta diinta islaamka waxaa mid walba si gaar ah ugu asteysan xuska maalintan caashuura.
Mad-habka suniga oo ah midka ugu ballaaran ee matala inta badan shucuubta muslimiinta waxay maalintan ku weyneeyaan soon sunno ah oo oga dhigan soon la soomo midka ugu fadliga badan soonka ramadaanka ka dib.
Oo waxayna u daliishadaan soonka maalintan axaadiista ka sugnaatay nabiga scw oo sheegay in soonka maalintan lagu dhaafayo dambiga sanad dhan oo ah sanadkii tagay.
Shiicada oo ah Mad-habka ku xiga xagga tirada madaahibta islaamka u nisbo sheegta waxay maalinta caashuuraa u tahay maalin murugo oo ay u baroortaan dilkii loo geystay Sayid imaam Xuseen bin Cali bin Abiidaalib cs oo ah wiilkii uu awoowga u ahaa rasuulkeena Muxamad Scw oo ay dhashay gabadhiisii Faadumo rasuul cs.
Shiicadu intooda badan ma soomaan maalintan laakiin waxay ka istaagaan biyo cabidda iyaga oo matalaya oomintii la oomiyay Sayid Xuseen cs iyo intii la socotay oo isugu jiray ahlulbeyd iyo muslimiin kale oo safka dagaalka kula jirtay intaan la leyn ka hor.
Muslimiinta suniga waxaa ku jira qaar taariikh ahaan u xusa iyaga oo sooman maalintan oo ka murugooda xasuuqii la xasuuqay in badan oo ka mid ah Ahlulbeydkii nabiga scw oo uu ugu horeeyo kii uu jeclaa rasuulkeena muxamad scw ee uu umadiisana faray jacaylkiisa Sayid imaam Xuseen bin cali rc oo la dilay isaga oo ka gilgilanayay dulmi lagula kacay muslimiintii waqtigaas nooleyd iyo afduubkii xukun iyo xoolaba lahaa ee ay isku gaaryeeleen reer banuu umayadii waqtigaa talada muslimiinta qaabka dhaxaltooyada ah u qaadatay.
Waxaa kale oo iyana xusid mudan in waxyaalo badan oo tacaddi ah oo ay sameeyaan shiicada qaarkeed maalintan oo kale ay tahay xadgudub aan qaban Sayid xuseen rc,sida inay silsilado iyo seefo isla dhacaan oo xitaa dhiig laga keeno dhallaan yaryar oon iyaga dooran inay naftooda ciqaabaan.
Kaliya waxaa muhiim ah in murug ka dib darsiga laga qaadanayo shahiid imaam Xuseen rc uu noqdo mid ku qotoma oo looga dayanayo in doonista cadaalladda iyo xoriyadda iyo diidista dulmiga iyo dullinimada ay istaahilaan wax loo huro naf iyo maalba.
ARIMAHA DIIMAHA IYO FIRQOOYINKA., CAALAMKA ISLAAMKA, DHACDOOYINKA DUNIDA MUSLIMKA